Uninzi lundibiza ngokuba nguDoug, namhlanje yayinguTata | Martech Zone
Uninzi lundibiza ngokuba nguDoug, namhlanje yayinguTata
NgoMvulo, Juni 18, 2007 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Ngokunyaniseka konke, andikhange ndicwangcise ixesha lesi sithuba. Yinto eqondakalayo, nangona kunjalo, ukuba kufuneka ndibelane ngayo nani nonke.
Fred ufumane iqela labantu liphela kwi-tizzy kutsha nje xa ebuza malunga nobudala nefuthe lazo kwitalente yeshishini. Kubandakanyiwe ukubuyela umva kwaba UDave Winer, UScott Karp, uSteven Hodson, kunye nabanye abaninzi Waphendula.
Khange ndibenanto ingako ndiyithethayo ngesihloko ke ndaye ndaphawula kancinci. Ndiyayixabisa indawo yokusebenzela eyahlukeneyo apho ulutsha kunye namava akhoyo. Abantu abancinci bahlala benganikeli ngqalelo ingako kwimida ukuze ukubonakala kwabo okutsha kunye nokungabikho koloyiko kuzibonakalise ekuthatheni umngcipheko nasekuzeni nezisombululo. Ngelishwa, ndiyathanda ukucinga ngam njenge 39 encinci kwaye ndihlala ndithetha phandle kwaye ndikhangela ezinye iindlela ezilungileyo kwesiqhelo. Amava, kwelinye icala, athambekele ekulinganiseni umngcipheko kunye neziphumo- amaxesha amaninzi aphazamisa intlekele.
Njengomphathi weMveliso, umngcipheko endiwubonisayo awukho kwinkampani yam kuphela. Umngcipheko endicinga ukuba udluliselwe kubaxhasi be-6,000 abasebenzisa isoftware nangaphaya kwiinkampani zabo. Yipiyano entle entle exhonywe eluphahleni, ke ndifuna ukuqinisekisa ukuba iintambo zikhuselekile kwaye amaqhina onke abotshiwe ngaphambi kokuba sithathe isigqibo sokuyihambisa endaweni yayo.
Namhlanje kwahlukile. Xa ndibeka imida ethile namhlanje kwizixhobo kunye neprojekthi, bendijongene nomntu ohlekisayo esithi, “Kulungile, Tata!”. Nangona yayenzelwe ukuthukisa, ndiyikhuphile ngokuzolileyo. Ukuba kukho into enye endizingca ngayo ebomini bam, ibinguTata omkhulu.
Ndinabantwana ababini abonwabileyo, musa ukungena engxakini .. nge enye yamkelwe ekholejini kunye nemali yokufunda kunye nenye esandula ukuphumelela i “Ghandi Award” esikolweni sakhe. Bobabini banetalente kwezomculo - omnye uyacula, uqamba, kwaye uxube umculo… omnye ngumlingisi omangalisayo kunye nemvumi.
Ke, umntu endisebenza naye omncinci emsebenzini bekufanele ukuba uza nento eyahlukileyo kuno "Tata". Ndiyalithanda igama elithi "Tata". Ukuba ndivakala ngathi "nguTata", mhlawumbi kungenxa yokuba bendiphethe imeko ekhumbuza ukuba kufuneka uqeqeshe umntwana. Okumangalisayo kukuba, andifane ndibenezi meko nabantwana bam.
Ubudala kunye nomsebenzi
Ngaba oku kuyalutshintsha uluvo lwam kubudala, kwishishini, nakushishino? Ngokuqinisekileyo akunjalo. Ndisakholelwa ukuba sidinga ukungoyiki kolutsha ukunyanzela imida yoko sinokukufikelela. Mna do bakholelwa ukuba uninzi lweengcali luya lunyamezeleka ngakumbi kubudala kwaye luye lubenonxweme ngaphakathi kwemida ebekiweyo. Ndiyayithanda impikiswano, nangona ndisakholelwa kwimbeko, uxanduva, kunye nemida.
Izifundo endizifundisa abantwana bam kukuba bendikule ndawo babekuyo ngaphambili, ndizenzile iimpazamo, kwaye ndijonge phambili ukudlulisa ubulumko endibufundileyo. Oko akuthethi ukuba kufuneka balandele iinyawo zam, nangona kunjalo. Ndiyayithanda into yokuba intombi yam iseqongeni xa kwandithatha iminyaka ukufumana ukuzithemba. Ndiyayithanda inyani yokuba unyana wam usiya eKholejini xa ndisiya ngaphandle kokujoyina i-Navy. Bandothusa yonke imihla! Inxalenye yayo kungenxa yokuba bayayiqonda imida, bayandihlonipha, kwaye bayazi ukuba banenkululeko yokwenza into abanokuyithanda (ukuba nje ayibenzakalisi okanye ibangele omnye umntu).
Ndiyathemba ukuba "umntwana" wam emsebenzini angafunda into efanayo! Andithandabuzi ukuba uya kuba nakho ukuyothusa inkampani kwaye abe nefuthe elikhulu, kodwa izinto zokuqala kuqala… qaphela kwaye uhloniphe amava akhoyo kwaye uyiqonde imida. Emva kokuba ukwenzile oko, wothusa wonke umntu ngokutshisa umzila omtsha kwicala ekungekho mntu wakha wacinga ngalo. Ndiza kukunceda ufike apho! Emva kwayo yonke loo nto, yintoni "uTata"?
PS: Kunyaka olandelayo, ndingathanda ikhadi loSuku lukaTata… kwaye mhlawumbi iqhina.
Ngaba yimithombo yeendaba "yeNtlalo" ngenene?
Juni 30, 2007 ngo-8: 18 AM
Uvakala njengomfana okwaziyo ukuqengqeleka ngamanqindi. Njengentloko yesebe, ndifumanisa ukuba abantu abasebenza phantsi kwam bayazithanda iimpawu zakho. Ngendlela, ndiyavuyisana nabantwana bakho.